DFS iyo AMISOM oo walaac ka muujiyey dilkii askariga Mareykanka ee gudaha Somalia… – Hagaag.com
DFS iyo AMISOM oo walaac ka muujiyey dilkii askariga Mareykanka ee gudaha Somalia…
Posted on 11 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Taliyaha Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, Paul Lokech ayaa sheegay inay Ciiddanka Maraykanka door muuqda ka qaataan Hawlgalka Somalia, isla markaana la tebi doono haddii Ciiddankaasi laga saaro gudaha Somalia.
Taliyahaasi oo la hadlay Wargeyska The Daily Beast ee ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa sheegay in dhamaan Ciyaartoyda Ammanka ee halkan joogo uu mid kasta leeyahay door muhiim oo sax ah.
“Haddii uu mid ka mid ah Ciyaartoydaasi ka baxo iyo haddii la buuxin waayo doorkooda, waxaa hubaal ah inay ka tegi doonaan Ammaan Furan, taasina su’aal kama taagna” ayuu yiri Taliyaha Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM, Paul Lokech.
Wargeyska The Daily Beast waxa uu qoray inay Taliska Ciidanka Maraykanka ka jooga Afrika ee AFRICOM sii wadi doonaan Hawlgallada ay ka wadaan gudaha Somalia, balse ay DFS iyo Hawlgalka AMISOM walaac ka muujiyeen dilkii Askarigii Maraykanka horseedi doonto in Milliteriga Mareykanka laga wada daad-gureeyo gudaha Somalia.
Dhinaca kale, Waaxda Difaaca Maraykanka ee “ The Pentagon” ayaa horey u shaacisay qorshe 50% lagu dhimayo Tiradda Ciiddanka Maraykanka ee ku sugan dalalka Calaamka, gaar ahaan kuwa ka hawlgala dalal ay ka mid yihiin Somalia iyo Afganistan.